Bale Oo Waraysi Dheer Kaga Hadlay Mustaqbalkiisa, Kooxaha Doonaya, Cristiano Ronaldo, Zidane, Guulaha Uu Filayo Iyo Arrimo Kale
HomeWararka MaantaBale Oo Waraysi Dheer Kaga Hadlay Mustaqbalkiisa, Kooxaha Doonaya, Cristiano Ronaldo, Zidane, Guulaha Uu Filayo Iyo Arrimo Kale
Weeraryahanka xulka qaranka Wales iyo Real Madrid ee Gareth Bale ayaa waraysi dheer oo uu siiyey wargeyska Marca ee kasoo baxa magaalada Madrid waxa uu kaga hadlay arrimo badan taabanaya mustaqbalkiisa, guulaha uu filayo iyo isbeddelladdii ku dhacay sannadihii u dambeeyey.
Waraysiga oo shabakadda ciyaaraha ee CADALOOL ay soo turjuntay waxa uu u dhacay sidan:
S: Dhaawacyadii kusoo gaadhay xili ciyaareedkii hore kaddib, sideed hadda dareemaysaa?
J: Way caddahay in ciyaaraha xagaaga (Pre-season) ay adag yihiin, si adag ayaananu u shaqaynaynaa si aanu qaabkayagii usoo ceshano. Waa in aad diyaar u ahaato isla marka uu xili ciyaareedku bilaabmayo.
S: Ka warran kuraantii dhaawacu kaa gaadhay?
J: Wakhtigan ma sameeyo tababar culays badan leh si aan usoo kabto. Sannadkii hore xanuunkii i helay ayaa igu adkeeyey inaan qaabkaygii kusoo noqdo, si adag ayaan uga shaqeeyey dib usoo kabashada. Sannadkii hore, aad ayay ii dhibtay inaan dhaawacmo sababtoo ah waxaan isku dayay inaan dib usoo laabto oo aan kooxdayda caawiyo, iyo in aan sida ugu wanaagsan u ciyaaro. Waxa laga yaabaa in aan wakhti badan soo kabanayay oo aan lay khasbin, laakiin xanuun ma jirin. Hadda, kuraantii way awoodaysatay, diyaar ayaanan ahay.
S: Dib ma u daawatay wixii ka dhacay Cardiff? Garoonka, soo geliddaadii goobta ciyaarta iyo koobkii oo aan filayo in aanay fududayn?
J: Si daacad ah marka aan kuula hadlo, lix toddobaad ka hor ciyaartii finalka si aad ah ayaan u shaqaynayay si aan usoo laaban karo, in kursiga kaydka aan fadhiyeyna waxay ahayd abaalmarintii iigu qaalisanayd waayo maan u shaqaysanin inaan halkaas tago. Si aad ah ayaan u shaqeeyey, 12 saacadood ayaan maalin kasta tababar samayn jiray si aan u ciyaari karo finalka, kuraantu ii bogsato iyo si aan u helo daqiiqado aan garoonka soo galo. In aan qoyskayga iyo asxaabtayda hortooda ku qaado koobku waxay ahayd wax cajiib ah.
S: Maxaad rajaynaysaa xili ciyaareedkan?
J: Inaad si fiican u ciyaarto ciyaaraha isku diyaarinta xili ciyaareedka oo aad boqolkiiba boqol noqoto kuwa ciyaarta lagu bilaabo. Markii aan sannadkii hore kasoo laabtay dhaawaca, waxaan diyaar ahaa 50 boqolkiiba, laakiin waxaan isku dayey inaan horumar sameeyo taasna waxa iga diiday dhaawacii kuraanta. Hadafkayga sannadkani waa inaan jidh ahaan caafimaad qabo oo aan sii wado inaan u ciyaaro Real Madrid.
S: Ma kula tahay in sannadkan uu noqon doono kii ugu wanaagsanaa ee Bale soo mara ama uu si joogto ah u ciyaaro?
J: Waxaan isku deyi doonaa inuu noqdo sannadkaygii ugu wanaagsanaa, dabcan, mar kasta, haddii aan ka badbaado dhaawacyo waxa uu noqon doonaa sannad ii wanaagsan, waana inaan awood u yeesho inaan ka badbaado dhaawacyada.
S: Hadalo ayaa ku jiray suuqa ku saabtan mustaqbalkaaga, miyaad ku fikirtay inaad ka tagto Real Madrid?
J: Maya, Wax walba way adkaadeen intii aan dhaawacnaa, laakiin wax kale may ahayn. Wali si fiican ayaan u ciyaari karaa kubadda cagta, marka aan marxaladdayda ugu wanaagsan marayo, sida ugu wanaagsan ayaan ugu ciyaari karaa naadigayga. Waxaan Madrid u saxeexay heshiis wakhti dheer ah, waanan ku faraxsanahay kooxdan, waxaanan hubaa inaan sannad wanaagsan qaadan doono, qorshahayguna waa inaan goolal dhaliyo.
S: Ma dhabbaa in Manchester United ay ku doonaysay?
J: Runtu waxay tahay in anigu aanan diyaar u ahayn inaan tago. Arrinta jirtaa waa in aan ahay British sidaas ayaana mar walba la iigu xidhiidhinayaa inaan dib ugu laabanayo. Waxay arrintan oo kale ku dhacday Beckham iyo ciyaartooyadii kale ee Ingiriiska ahaa ee Spain ka ciyaaray. Ma aha wax cusub. Waan ku faraxsanahay inaan u ciyaaro Madrid, xiisaha koox kuu haysaana waa xiise uun, laakiin may jirin wax dhab ah ama dalab ah amaba wada xaajood ah.
S: Ma dareentaa taageerada Zidane? Wali mala hadashay?
J: Halkan (Maraykanka) waxa aanu joognaa maalmo yar, waxa aanu haysanaa wakhti badan oo xagaaga ah. Waa in aanu si fiican iskugu diyaarino ciyaaraha dhici doona.
S: Miyaad filaysay in Zidane uu si degdeg ah guulo u gaadhi doono?
S: May jirin dad sidaas u fikirayay, laakiin wuxuu haystay taageerada kooxda, si adag ayaanu u shaqaynay, dhamaantayo koox ahaan iyo dadka farsamadaba waanu shaqaynay, waxaananu ku guuleysanay koobab badan. Waxa aanu rajaynaynaa in aanu sii wadno oo aanu ku guuleysan karno koobab kale.
S: Miyaanay walaac kugu haynin in sannadkan ay kugu adkaato inaad boos ka hesho kooxda Real Madrid?
J: Waa suurtogal, laakiin taas ayaan halkan u joogaa, waana sababta aan ugu ciyaaro kooxda ugu wanaagsan dunida si aan ugula guuleysto koobabka ugu badan. Waxa ugu muhiimsan waa inaan ka fikirno in aanu dhamaantayo wada guuleysano. Sannadihii hore, waxaan is lahaa si fiican ayaad u ciyaarteen LaLiga ama Champions League, laakiin xili ciyaareedkii hore labadaba waanu ku guuleysanay, waxaana sabab u ahayd isku beddelkii ciyaaryahannada oo mid walba uu firfircooni dareemayay, waana hab wanaagsan oo shaqaynaya, sababtoo ah ciyaaryahannadu waxay u baahan yihiin wakhti ay ku nastaan. Way fiican tahay, kubadda cagta wakhtigani waa in qof walba wax kusoo kordhiyo kooxda.
S: Ma aaminsan tahay in Cristiano Ronaldo uu ka tegayo Real Madrid?
J: Ma aanan akhriyin wax ku saabsan, macluumaadna kama hayo waxa dhici doona. Bal eeg, Shalay ayaan ogaaday in Lukaku uu ku biiray Manchester… Xaqiiqdii ma garan karo in uu Ronaldo tegayo iyo in kale.
S: Laakiin, ma rajaynaysaa inaad usii wada ciyaartaan Real Madrid?
J: Xaqiiqdii, koobab badan ayaanu ku wada guuleysanay, si fiican ayaanu u wada ciyaarnay, mana rabno in wax isbeddelaan.
S: Ma rajaynaysaa inuu sii joogayo?
J: Isaga ayaad weydiin doontaa.
S: Ma kula tahay in kooxdani tahay tii ugu wanaagsanayd ee aad la ciyaarto?
J: Ciyaartooyo badan ayaanu haysanaa, haddii aanu midkood ciyaarin, mid kale ayaa imanaya oo sidiisii oo kale u ciyaaraya. Ciyaartooyo awood badan ayaa garoonka soo gelaya. Haa, taasina muhiim ayey tahay sannadka oo dhan.
S: Mala yaabtay Asensio
J: Maya. Si fiican ayuu u ciyaarayaa kulamada iyoo tababarkaba. Sannadkii hore aad ayuu u cadcadaa, waana ciyaartoy wanaagsan. Sannadkana waxaan filayaa inuu sidii oo kale usii wadi doon, waanay u wanaagsan tahay Madrid.
S: Fikir noocee ah ayaad ka haysataa Kulian Mbappe?
J: In badan maan daawan isagoo klubadda ciyaaraya, laakiin waan ogahay inuu yahay ciyaartoy wanaagsan, haddii uu Real Madrid yimaaddona waxay caddaynaysaa inuu sannadkii hore si fiican u ciyaaray, waxaanan rajaynayaa in uu kooxda caawin doono haddii uu yimaaddo.
S: Ma aaminsan tahay in wali xulka Wales uu u gudbi doono Koobka Adduunka?
J: Haa. Waxa noo hadhay afar ciyaarood, afar dhibcoodna waanu ka dambaynaa waddanka hoggaanka haya.
S: Kooxdee ayay kual tahay inay Real Madrid ku wada loollamayaan horyaalka sannadkan?
J: Kooxihii caadiga ahaa. Kooxo badan oo Ingiriis ah, Bayern Munich, Barcelona, Juventus, PSG iyo kuwo kale, laakiin dhamaadka waa inaad ka guuleysato wax kasta oo ay kugu qaadato.
S: Maxaad ka qabtaa dhalleecaynta loo jeediyo BBC? Maxaad se ku odhan lahayd kuwa sheega in kooxdu ku wanaagsan tahay marka BBC ay kala maqan yihiin?
J: Waa fikirkooda, xor ayaanay u yihiin inay fikirkooda sheegaan.
S: Real Madrid koobab ayay ku guuleysatay intii ay joogeen BBC…
J: Xaqiiqadu iyadaa hadasha. Dadku way hadli karaan, laakiin aakhirka tababaraha ayaa go’aanka leh.
S: Ma ku raaxaysataa marka aad la ciyaarayso Benzema iyo Ronaldo?
J: Haa. Sannado badan ayaanu wada qaadanay, waxaananu dareennaa raaxo marka aanu wada ciyaarayno, waxyaabo badanna waanu ku wada guuleysanay. Waa go’aanka tababaraha sida uu u xulanayo cidda ciyaarayso, annaguna sida ugu fiican ayaanu u ciyaari doonaa.
‘Naga Daaya Qaylada’ – Ozil Oo Cadho Is Hayn Kari Waayey
03/09/2017 Abdiwahab Ahmed
Ronaldo Oo $18.5m Guri Kaga Iibsaday USA Wakhti Lala Xidhiidhinayo MLS
17/08/2015 Abdiwahab Ahmed